Umashini wokulinganisa umshini wokushisela abakhiqizi, abahlinzeki - China Isikhungo sokulinganisa sokushisela umshini womshini wefektri
Workshop lokulinganisa zokushisela Machine-1600
Isicelo kanye Isici Ifanele bumbela indololwane, tee, isiphambano futhi Y ukuma (45 ° no-60 °) nokufakwa PE, PP, PVDF e workshop. ► Futhi isetshenziselwa ukwelula ukulingana okubunjiwe ngomjovo futhi kwenziwe ukuhlanganiswa okuhlanganisiwe. ► Isakhiwo esihlanganisiwe. Akukho okusele ngaphandle kokukhetha izibopho ezikhethekile ezahlukahlukene ngenkathi kwenziwa okufakiwe okuhlukile. ► I-PTFE ekhishwe ipuleti lokushisa elifudumele. Ithuluzi lokucaba ngogesi elinomkhawulo wokuphepha. ► Ukucindezela kokuqala okuphansi kanye nesakhiwo esiphakeme esinokwethenjelwa. ► Hlukanisa ...
Workshop lokulinganisa zokushisela Machine-1200
Workshop lokulinganisa zokushisela Machine-450-630
Isicelo kanye Isici Ifanele bumbela indololwane, tee, isiphambano futhi Y ukuma (45 ° no 60 °) nokufakwa PE, PP, PVDF e workshop. ► Futhi isetshenziselwa ukwelula ukulingana okubunjiwe ngomjovo futhi kwenziwe ukuhlanganiswa okuhlanganisiwe. ► Isakhiwo esihlanganisiwe. Akukho okusele ngaphandle kokukhetha izibopho ezikhethekile ezahlukahlukene ngenkathi kwenziwa okufakiwe okuhlukile. ► I-PTFE ekhishwe ipuleti lokushisa elifudumele. Ithuluzi lokucaba ngogesi elinomkhawulo wokuphepha. ► Ukucindezela kokuqala okuphansi kanye nesakhiwo esiphakeme esinokwethenjelwa. ► Hlukanisa ...
Workshop lokulinganisa zokushisela Machine-315
Isicelo kanye Isici Ifanele bumbela indololwane, tee, isiphambano futhi Y ukuma (45 ° no-60 °) nokufakwa PE, PP, PVDF e workshop. ► Futhi isetshenziselwa ukwelula ukulingana okubunjiwe ngomjovo futhi kwenziwe ukuhlanganiswa okuhlanganisiwe. ► Isakhiwo esihlanganisiwe. Akukho okusele ngaphandle kokukhetha izibopho ezikhethekile ezahlukahlukene ngenkathi kwenziwa okufakiwe okuhlukile. ► I-PTFE ekhishwe ipuleti lokushisa elifudumele. Ithuluzi lokucaba ngogesi elinomkhawulo wokuphepha. ► Ukucindezela kokuqala okuphansi kanye nesakhiwo esiphakeme esinokwethenjelwa. ► Hlukanisa t ...